Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo ee Dhoobada Qumman
Caawin ma u baahan tahay? Hubi inaad booqato golayaashayada taageerada si aad uga hesho jawaabaha su'aalahaaga!
1. Maxaad u dooratay qiyaasta dhoobada saxda ah? (Waa maxay faa'iidooyinka qalabka cabbirka dhoobada ee saxda ah?))
Waxaa jira aalado cabbir sax ah oo badan oo ay sameeyeen dhagxaanta, birta iyo dhoobada. Waxaan tusaale ka bixin doonaa SERAALKA MASTER CERAMIC.
Fagaaraha Master Ceramic ayaa gabi ahaanba lagama maarmaan u ah in si sax ah loo cabbiro isku dheelitirnaanta, isku -dheellitirka iyo toosnaanta X, Y, iyo Z faasaska aaladaha mashiinka. Fagaarahan sayidka dhoobada ah waxaa laga sameeyay alaabada dhoobada aluminium oxide, ikhtiyaar khafiif ah oo loo yaqaan granite ama steel.
Barxadaha dhoobada waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa in lagu hubiyo isku -xirnaanta mashiinka, heerka iyo mashiinka labajibbaaran. Miinooyinka oo la simo iyo mishiinka oo la qallajiyo ayaa muhiim u ah labadiinaba in aad qaybahaaga ku haysataan dulqaad iyo in aad si fiican u dhammays tirtaan. Barxadaha dhoobada ayaa aad ugu fudud in la maareeyo markaa mashiinnada granite ee mashiinnada gudaheeda. Wiish looma baahna si loo dhaqaajiyo.
Cabbiraadda dhoobada (taliyayaasha dhoobada) Astaamaha:
Nolosha Kordhinta Dheer
Waxaa laga soo saaray alaabo dhoobada horumarsan oo leh adayg gaar ah, goobahan sayidka dhoobada ah aad bay uga adag yihiin dhagxaanta ama birta. Hadda waxaad yeelan doontaa daal yar marka aad si joogto ah u saarto qalabka dusha iyo mashiinka dushiisa.
Joogtaynta La Hagaajiyay
Dhoobada horumarsan gabi ahaanba waa mid aan dalool lahayn oo aan firfircoonayn, sidaa darteed ma jiro nuugid qoyaan ama daxal oo sababi kara xasilooni-darro. Kala duwanaanshaha cabbirka qalabka dhoobada horumarsan ayaa aad u yar, taas oo ka dhigaysa barxadaha dhoobada gaar ahaan qiimo u leh wax -soo -saarka dabaqyada leh qoyaan badan iyo/ama heerkul sarreeya.
Cabbiradu waxay si joogto ah ugu saxsan yihiin alaabada dhoobada horumarsan maxaa yeelay fidinta kuleylka ee dhoobada aad bay u hooseysaa marka la barbardhigo birta ama dhagxaanta.
Qabashada fudud iyo qaadista
Kala badh miisaanka birta iyo saddex meelood meel ka mid ah granite, hal qof ayaa si fudud u qaadi kara una maamuli kara inta badan aaladaha cabbirka dhoobada. Fudud oo si sahlan loo rari karo.
Cabbiraaddaan dhoobada qumman waxaa loo sameeyey si loo dalbado, markaa fadlan u oggolow 10-12 toddobaad dhalmada.
Waqtiga hogaaminta wuu kala duwanaan karaa iyadoo ku xiran jadwalka wax soo saarka.
Diyaar ma u tahay inaad bilowdo? Nala soo xiriir maanta si bilaash ah!
La taaban karo Epoxy, Sax Granite, Qalinka Granit Square Ruler, Sax Granite Cube, Sax Granite dusha sare, Isbarbar dhigyada Granite Precision,